Umlando kaMabatha uziphinda kabusha eThe Courtyard – Bayede News
by nguDez Khumalo Posted on 7 February 2020 7 February 2020
Ngenyanga uNhlolanja kuya ekuqaleni kukaNdasa abathandi beshashalazi kuzobuye kuvuke okwezinsuku ezadlula kubo zangesikhathi somdlalo kaWilliam Shakespeare uMacbeth owaguqulelwa olimini lwesiZulu nguMnu uWelcome Msomi maqede kwasha izikhotha emhlabeni jikelele. Olandele ezithendeni zokwenziwa nguPhingoshe (isithakazelo sakwaMsomi) eminyakeni eminingi eyedlula nguMnu uSiza Mthembu ongumfundisi ophikweni lweDrama esikhungweni iDurban University of Technology (DUT). UMvelase (isithakazelo sakwaMthembu) uguqule umdlalo kaShakespeare iRomeo and Juliet wawenza oweshashalazi okhuluma ngodlame lwezamatekisi. Lo mdlalo ugibela esiteji usuyindaba yothando ethakwe ngomculo nabadlali bekhethelo okuyizitshudeni ezenza unyaka wesibili ezifundweni zedrama. UMthembu uyena ongumqondisi walo mdlalo ozobonakala eThe Courtyard eDUT kusukela zingama-28 kuNhlolanja kuya ziyisi-6 kuNdasa. Ohumushele lo mdlalo olimini lwesiZulu nguMnu uSabatha Ngcobo.
Intatheli ibuzile kuMvelase ukuthi ngabe yini le emkhuthaze ukuthi aguqulele lo mdlalo kaShakespeare olimini lwesiZulu. Uphendule wathi: “Izifundo ebengizenza eWits University lapho kade ngenza khona iqhuzu leHonours zingiphoqe ukuthi ngibheke imisebenzi kaShakespeare ukuthi ingahlukaniswa kanjani nenqubo yobukoloni. Kulapho ngiqondise khona imidlalo kaShakespeare efana noJulius Caesar, uMacbeth naye uRomeo and Juliet. Ngalo mdlalo ngiqhubeka lapho ngigcine khona eWits University kanti abayokwazi ukuhambela lo mdlalo bayobona into yamehlo ngendlela umdlalo oqondiswe ngayo,” kuchaza uMthembu. UMthembu akamusha kwezobuciko. Ngaphandle kokuthi ufunde wagogoda futhi usaqhubeka endimeni yemidlalo yeshashalazi, ubhale imidlalo yomsakazo waqondisa namaﬁ limu.
Waba ngomunye wethimba labadlali elalibhala umdlalo oyisoap opera womsakazo iKusakusa eyayidlala nsukuzonke emsakazweni u-Ukhozi FM. Usebenza ngokusondelana noNks uChrista Biyela osezakhele olukhulu udumo ebhalela ithelevishini emidlalweni efana neThe River neThe Queen kanti nguye futhi owayehola ithimba lababhali beKusakusa ku-Ukhozi FM. Ngokwemuva lakhe uMthembu akavelanga waqonda nje emkhakheni weshashalazi. Lokhu kwadalwa wukuthi abazali bakhe abasaphila namanje babengayizwa eyokungena kwakhe kulo mkhakha.
“Ungibona nje ngaqala ezifundweni zeMarketing nokho ngagcina ngingaziphothulanga ngoba kwanalelizwi ngaphakathi kimi elalingidonsela kwezobuciko, ikakhulukazi ishashalazi. Ukubona ukuthi ngizogcina ngikwezobuciko kwakuqale ngiselusa umhlambi wezinkomo le emakhaya kwaMaphumulo singakezi eNewland West lapho umndeni wami sewuzinze khona. Ngenxa yalokho angizange ngiziphothule izifundo zeMarketing ngagcina ngingene eDUT ngazokwenza izifundo zedrama,” kuchaza uMthembu.
Uthi izifundo zeMarketing azibanga neze wukumosha isikhathi. “Lokho ngakubona sengenza wona lowo msebenzi wokwazisa enkampanini yolunye uvava lwenkunzi kwezeshashalazi uMnu uJerry Pooe. Yilapho ngabona khona ukuthi konke okwenzeka phansi komthunzi welanga kunesizathu sakho,” Kubeka uMthembu.
Njengamanje uMthembu ufundisa eDUT lapho efundisa khona abenza unyaka wokuqala kwezokulingisa. Uphinde afundise abenza isiZulu onyakeni wesibili kuyona le nyuvesi. Uphinde asize abafundi abenza unyaka wokugcina abaqondisa imidlalo kulesi sikhungo nabanesiﬁ so sokuba ngabaqondisi ngokugcwele. Ngokwebanga aselihambile uMvelase uqondise amaﬁ limu nasemsakazweni. Emisebenzini azishaya ngayo isifuba wukuqondisa kwakhe umdlalo uJulius Caesar. “Uma kuza ekuqondisweni kwemidlalo ngiphenduka ugubhu oluzibethayo ngoba yilapho nginamandla kakhulu khona.
Ngokweziﬁ so zami ngiﬁ sa ukuphelela ekuqondiseni abalingisi futhi kube yimi engibaqashayo esikhungweni okungesami. Ngaphezulu kwalokho ngiﬁ sa ukuba nesikole sezobuciko esinomfuziselo wesikasaziwayo kuthelevishini u-Ophrah Winfrey,” kuphawula uMvelase ngokuzethemba. Ezintweni ezimephula umoya uMvelase yindlela okunganakekelwe ngayo abafana abakhulayo. Abantu abanakwe kakhulu ngokwakhe ngabesifazane nezingane ezingamantombazane. “Mkhulu umonakalo owenzeka kubafana benganakwe muntu. Ngiﬁ sa ukusondelana nabo ngenhloso yokubasiza ezinkingeni abahlangabezana nazo ngezinsimbi usuku nosuku.” Umdlalo iRomeo and Juliet izokhonjiswa ezinsukwini ezibalulwe ngenhla njalo ngelesi-7 kusihlwa. usuku nosuku.” Umdlalo iRomeo and Juliet izokhonjiswa ezinsukwini ezibalulwe ngenhla njalo ngelesi-7 kusihlwa.